Lọ ọrụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ | Ndị na-emepụta ọgwụ na China na ndị na-eweta ngwaahịa
MAST-V bụ sterilizer ngwa ngwa, kọmpat na vasatail nke mere nyocha ma mepụta dịka ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụike na CSSD. Emere ya ma mepụta ya agwakọtara ikike dị elu na arụmọrụ-na-efu, ma na-enye ntụkwasị obi dị elu na arụmọrụ dị mfe.
Nhazi nke ọnụ ụlọ kwekọrọ na steeti GB1502011, GB8599-2008, CE, European EN285 standard, ASME and PED.
Ngwaọrụ Mkpofu gas EO
Site na catalytic dị elu, igwe ethylene oxide gas ọgwụgwọ nwere ike decom gas EO n'ime carbon dioxide na vapo mmiri ma wepụta onwe ya ozugbo na mpụga, na-enweghị mkpa ịwụnye pipeline dị elu. Uzu ire ere dị elu karịa 99,9%, nke na-ebelata oke ikuku ethylene oxide.
Ethylene Oxide ịkpa nri
XG2.C usoro sterilizer na-ewe 100% ethylene oxide (EO) gas dị ka ụlọ ịgba ụlọ. A na - ejikarị ya eme ihe maka ịgba ọgwụ mgbochi maka akụrụngwa ọgwụ, ngwa anya, na ngwa elektrọnik ọgwụ, plastik na ọgwụ ndị na - enweghị ike ịnagide oke okpomọkụ na mmiri ọgwụ.
SHINVA Plasma sterilizer na-ewere H202 dị ka onye na-agwọ ọrịa na-etolite ma na-etolite ala plasmatic nke H202 site na mpaghara electromagnetic n'okpuru obere okpomọkụ. Ọ na - agwakọta H202 gas na plasmatic iji mee nsị maka ihe ndị dị n'ime ụlọ ma mebie ihe fọdụrụ H202 mgbe nsị gachara.
MCSG Igwe Ọkụ Steam Dị Ọcha
Akụrụngwa a na-eji uzuoku ụlọ ọrụ iji kpoo mmiri dị ọcha iji mepụta uzuoku dị ọcha. A na-ejikarị ya eme ihe na ọgwụ, ọgwụ na ụlọ ọrụ nri iji nye uzuoku dị elu maka nsị dị elu. Ọ na-ezute ihe a chọrọ nke uzuoku nwere ike igbochi mkpọ edo edo na nsogbu akpa mmiri nke enweghị ezigbo uzuoku.
Ọcha Q Clean Electric Steam Generator
Usoro Q dị ọcha na-ehicha igwe eletriki eletrik na-arụpụta uzuoku dị ọcha site na kpo oku mmiri dị ọcha. Ọ nwere uru nke obere nha, ikpo ọkụ ọkụ, enweghị mmetọ, ọrụ dị mfe na ntụkwasị obi dị elu. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè dozie nchara na-adịghị ọcha na ngwá na mgbakwasa ihe ngwugwu.
Enwere ike iji ya na ngalaba nke stomatology na ophthalmology, ime ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụike ndị ọzọ. Okwesiri maka ihe nkpuchi siri ike ma obu nke ekpuchighi, akuku oghere nke akuku (aka eze na endoscopes), akuku akuko, akwa ejiji na tubes roba, wdg.
MAST-H (Ọnụ ọnụ ụzọ kwụ ọtọ, 1000L-2000L)
MAST-H bụ otu n'ime ụdị ọhụrụ nke steeti sterilizer nke ụgbọ mmiri nwere ikike dị ukwuu ka ọ na-enye ọnụ ụzọ na-apụ apụ, njikwa ọgụgụ isi, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ndozi dị mfe, nke kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa dị elu nwere nnukwu akpịrịkpa. Emepụtara ya dịka ihe kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụike na CSSD.
MAST-A bụ sterilizer ngwa ngwa, kọmpat na vasatail nke a na-enyocha ma mepụta dịka ihe ọhụrụ chọrọ nke ụlọ ọrụ ahụike na CSSD. Emere ya ma mepụta ya agwakọtara ikike dị elu na arụmọrụ-na-efu, ma na-enye ntụkwasị obi dị elu na arụmọrụ dị mfe.
Ọkara Autoclave Vertical Type Autoclaves LMQ.C (Ọkara-akpaka, 50L-80L)
Usoro LMQ.C bụ otu n'ime sterilizer kwụ ọtọ. Ọ na-ewe uzuoku dị ka ụzọ ọmụmụ ya nke nchekwa na akụ na ụba. A na-ejikarị ha eme ihe na obere ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ nlekọta ahụike, ụlọ nyocha maka ịme ụlọ maka akwa, arịa, usoro ọdịbendị, mmiri a na-ekpuchighị ekpuchi, roba, wdg. Imewe nke ụlọ kwekọrọ na steeti GB1502011, GB8599-2008, CE na EN285 ọkọlọtọ.
Akpaka Vetikal Type Autoclaves LMQ.C (Akpaaka, 50L-100L)